नेपालद्वारा ओमान सामु १ सय ९७ रनको लक्ष्य प्रस्तुत
केपी ओलीले दिए मोदीलाई जन्मदिनको शुभकामना
एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लागतमा नयाँ बसपार्कमा लोत्से मल सञ्चालन
नेपालमा १ हजार ५५८ संक्रमित थपिए, १० जनाको मृत्यु
अमेरिकाविरुद्ध नेपालले पहिले ब्याटिङ गर्दै
ओलीसँग छलफल गरेका कानुनमन्त्री कार्कीले भने- बजेट रोकिँदैन
माधव नेपालको पार्टी कार्यालयको मासिक भाडा ३ लाख !
चीनबाट आइपुग्यो थप ४४ लाख डोज भेरोसेल खोप
प्रदेश १ र बागमती सरकारको नेतृत्वमा हाम्रो दाबी छः माधव नेपाल
मंगलवार, भदौ २९, २०७८ क्यापिटल दैनिक
काठमाडौं । आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एकदिवसीय अन्तराष्ट्रिय सिरिजमा नेपालले ओमानसामु सामान्य लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । ओमानको अल अमिरात मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाल ४७ दशमलव ४ ओभरमा १ सय ९६ रनमा अलआउट भयो । नेपालले घरेलु टोलीलाई जितका लागि १ सय ९७ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ ।
नेपालका आसिफ शेखले सर्वाधिक ९० रन बनाए । आशिफले ७ चौका र १ छक्काको मदतले १ सय १२ बलमा सो रन बनाएका हुन् । आसिफ एक दिवसीय खेलमा नेपालका तर्फबाट उच्च स्कोर बनाउने ओपनर ब्याट्सम्यान बनेका छन् । ओमानविरुद्ध शतकमा चुकेपनि आशिफ उच्च स्कोर बनाउने ओपनर बने । आशिफकाे ब्याट चलेपनि अन्य खेलाडीको प्रर्दशन उल्लेख्य रहन सकेन ।
अघिल्लो खेलमा चम्किएको कुशल भुर्तेल रोहित पौडेल चल्न सकेनन् । कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले २१ रन बनाएको इनिङ्समा रोहित पौडेलले २०, सोमपाल कामीले ७ , विनोद भण्डारीले ६ रन बनाए । यस्तै कुशल मल्लले ४ र ओपनर कुशल भुर्तेल शुन्य रनमा आउट भए । बिक्रम सोबले २ रनमात्र बनाउन सके ।
बलिङमा ओमानका बिलाल खानले चार, जीशान मक्सूद, नेस्टर धम्बा र मोहम्मद नदीमले एक विकेट लिए । नेपालले आज पनि अघिल्लो खेलकै प्लेइङ ११ लाई निरन्तरता दिएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलवार, भदौ २९, २०७८, ०७:५१:२७
रोमाको जित, लेस्टरको बराबरी
नेपालले आज अमरिकासँग प्रतिस्प्रर्धा गर्दै
कोहलीले टि-२० टोलीको कप्तानी नगर्ने
च्याम्पियन्स लिगमा गए राति के भए ?
बिहिवार, भदौ ३१, २०७८ क्यापिटल दैनिक
गए राति भएको खेलमा म्यानचेस्टर सिटी, लिभरपुल, रियल मड्रिड जस्ता क्लबले जित हासिल गरेका हुन् । पुरा पढ्नुहोस्
उज्वेकिस्तान पुगेको टिम प्रशिक्षणको तयारीमा
केपी ओलीले दिए मोदीलाई जन्मदिनको शुभकामना शुक्रवार, आश्विन १, २०७८
केपी ओलीले दिए मोदीलाई जन्मदिनको शुभकामना क्यापिटल दैनिक
ओलीसँग छलफल गरेका कानुनमन्त्री कार्कीले भने- बजेट रोकिँदैन क्यापिटल दैनिक
माधव नेपालको पार्टी कार्यालयको मासिक भाडा ३ लाख ! क्यापिटल दैनिक
एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लागतमा नयाँ बसपार्कमा लोत्से मल सञ्चालन शुक्रवार, आश्विन १, २०७८
काठमाडौंमा भेरोसेलको दोस्रो डोज असोज ४ गतेदेखि लगाइने शुक्रवार, आश्विन १, २०७८
त्रिवि अन्तर्गतका सबै कलेज आजदेखि भौतिक उपस्थितिमै सञ्चालन हुने शुक्रवार, आश्विन १, २०७८
बचत र मुद्दती खातामा अब कुन बैंकले कति दिन्छन् ब्याजदर ? बिहिवार, भदौ ३१, २०७८
निर्माण व्यवसायमा धेरै श्रमिक ठगिएको गुनासो छः अर्थमन्त्री शर्मा बुधवार, भदौ ३०, २०७८